मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आज बजेटः कुन प्रदेशमा कति अर्ब ? - AJAMBARI
६ फाल्गुन,२०७४0526
६ असार,२०७५0177
६ जेठ,२०७५0219
१ फाल्गुन,२०७४0481
४ असार,२०७५0198
२ असार,२०७५0204
४ असार,२०७५0216
५ चैत्र,२०७४0450
७ फाल्गुन,२०७४0538
मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आज बजेटः कुन प्रदेशमा कति अर्ब ?
६ असार,२०७५ 177 0
काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि मुलुकका सातवटै प्रदेशले आज– शुक्रबार बजेट पेश गर्दैछन् ।
संविधानमा असार १ भित्र प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।
प्रदेश १ मा ३५ अर्बको बजेट
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वोले दिउँसो ४ बजे करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन् । प्रदेश मन्त्री आङ्बोले ३० देखि ३५ अर्ब रुपियाँबीचमा बजेट आउने बताएका छन् ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारका अनुसार बजेटमा कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार लगायतका विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दिने भनेको २० अर्ब रुपियाँमा आन्तरिक स्रोत जुटाएर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ ।
प्रदेश २ मा २८ खर्ब
यस्तै प्रदेश नम्बरमा करिब २८ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ । यो प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले १६ अर्ब रुपियाँ दिएको थियो, बाँकी १२ अर्ब आन्तरिक स्रोत जुटाएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।
यो प्रदेशको सरकारले कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नै कृषिलाई बढी प्राथमिकतामा राखेकाले बजेट पनि कृषिमा केन्द्रित हुने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ ।
२ नम्बर प्रदेशसभाको आज अपरान्ह बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । २ नम्बर प्रदेशमा कृषिपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश ३ मा ४० अर्ब पुग्ने
प्रदेश ३ मा १ र २ को तुलनामा बढी बजेट आउने भएको छ । यो प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले शुक्रबार ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्री ढुङ्गेलले ४० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने प्रतिकृया दिएका छन् ।
यो प्रदेश सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र विविधीकरण, पर्यटन विकास, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनलगायतका शीर्षकमा बढी बजेट छुट्याएको बताइएको छ ।
४ मा २६ अर्ब
४ नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ का लागि करिब २६ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ । सङ्घीय सरकारले दिने १३ अर्ब २७ करोड, सशर्तको ६ अर्बसहित २२ अर्बभन्दा केही बढी र प्रदेशमा आगामी वर्ष करिब ३ अर्ब जति राजस्व सङ्कलन हुने अनुमानका आधारमा बजेट ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
यो प्रदेशमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा बजेटले प्राथमिकता पाएको छ ।
प्रदेश ५ मा २८ अर्ब
प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले झण्डै २७ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सभाको ४ बजे बस्ने बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनासमेत मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । यो प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको १६ अर्ब, प्रदेशको स्रोतबाट ८ अर्बका साथै २ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने योजनासहित बजेट तयार पारिएको छ । यो प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार मात्रै पारित भएको थियो । यो प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, युवा श्रमशक्तिलाई नेपालमै स्वरोजगारी उपलब्ध गराउन सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कर्णलीमा १ बजे
यो प्रदेशमा प्रदेश सरकारले दिउँसो १ बजे आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । सुर्खेतमा बस्ने प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले २३ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । यो प्रदेशको बजेटले कृषि, सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
७ मा २५ अर्ब
प्रदेश ७ मा २५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । शुक्रबार ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री झपटबहादुर बोहोरले उक्त आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । यो प्रदेशमा सडक, पूर्वाधार, कृषिलगायतका शीर्षकमा बजेट छुट्याएको बुझिएको छ ।रातोपाटी
४ असार,२०७५0222
१ फाल्गुन,२०७४0350
४ चैत्र,२०७४03105